Home > Travel Europe > Easter fety Ao Eoropa ianao Tsy Handalo
Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 02/05/2020)
Easter fety tany Eoropa Miovaova arakaraka ny firenena ny firenena ary avy amin'ny tanàna ho tanàna. Izany no iray amin'ireo tena manan-danja sy tranainy indrindra fety ny Fiangonana Kristianina. Paska dia ny fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy avy tao am-pasana.
Ny daty fankalazana ny Paska isan-taona Manova. Izany dia matetika ankalazaina tamin'ny andro voalohany Alahady taorian'ny volana feno ny lohataona manaraka equinox. Tsy miseho amin'ny fotoana samy hafa isan-taona, miainga amin'ny faramparan'ny March ho tara Aprily.
In Kristianisma, Herinandro Masina dia ny herinandro talohan'ny Paska, ary ahitana Palm Alahady, Maundy Alakamisy, Tsara Zoma sy Asabotsy Masina. In Eoropa, firenena maro no mankalaza ny Paska ny mandrehitra afo lehibe izay indraindray dia antsoina hoe Jodasy afo. voalohany, nandrehitra afo ireo natao mba hankalaza ny fahatongavan'ny lohataona. Ity misy haingana mijery ny sasany ny toerana tena firenena Eoropeana mankalaza ny Paska.
Nanomboka Paka any Holandy
In Holland, fanomanana ny Paka andro manomboka eo anatrehan'i Karemy. Ity andro ity dia fantatra amin'ny hoe "Vastenavond" na Fast Eva. Nandritra izany fotoana izany, Holandy mankafy ny lehibe indrindra firongatry ny vahiny mpizaha tany izay maniry ny handray ny fankalazàna.
Ny olona am-piangonana ho an'ny tolotra Paska, izay matetika no manaraka ny fety sakafo. Kids mandeha mihaza atody mba hitady mamirapiratra voaravaka nahandro atody na sôkôla atody. Owner Tikken dia amin'ny toerana tena Paska lalao izay mandondòna atody ny olona miara-. Ny tanjon'ny lalao dia ny mampitresaka ny hafa ny atody tsy namaky anao.
Antwerp ho any Amsterdam Lamasinina
Antwerp ny Breda Lamasinina
Antwerp ny Utrecht Lamasinina
Easter fankalazàna any Frantsa
Frantsay mankalaza Paka amin'ny alalan'ny fanatrehana ny fiangonana manokana fanompoana, ny fety sakafo, ary ny Paka mihaza atody. Ho hitanao toeram-pivarotana sy ny mpivaro-mofo amin'ny bitro sokola, famohamandry, sy ny famantarana ny lohataona.
Ny Frantsay ihany koa ny tia sokola atody, mampiasa azy ireo be dia be ho an'ny ankizy ny Paska mihaza atody. Ny Frantsay ihany koa ny manana atody-Rolling fifaninanana izay mitaky nanakodia atody manta teo ny hantsana. Misy ihany koa ny lalao ny ankizy izay mitaky vaovao tossing atody eny amin'ny rivotra. Ny voalohany ny handrava ny atody dia tapa-kevitra ny resy izay hanome ny sasany ny vatomamy ny ankizy iray hafa.
Ny fomba amam-panao amin'ny Paska mahaliana Frantsa dia ny cloches volantes na "manidina lakolosy." Tsy misy fiangonana lakolosy peratra eo amin'ny Zoma sy ny Paska Alahady maraina. Izany dia raha tsy aorian'ny amin'ny fanompoana fiangonana Alahadin'ny Paska izay ny lakolosy peratra, mankalaza ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Frantsa ihany koa fantatra amin'ny fanomboana fampisehoana.
Easter fankalazàna in Italia
Paka in Italia dia resahina ny Italianina ho La Pasqua. Tsy toy ny hafa firenena Eoropeana, dia tsy hahita ny Paka bitro na atody Paka mihaza any Italia. Ity fankalazana ravoravo aza no malala rehetra momba ny fomba amam-panao.
Filaharana ara-pivavahana no natao tany Zavatra tanàna ary ny tanàna ny zoma sy asabotsy teo anatrehan'i Paka. Tamin'ny Alahadin'ny Paska, manantena ny sakafo hilalao ny anjara toerana manan-danja eo amin'ny fankalazana. Fomban-drazana ho an'ny fety ny fampidirana ny artichokes sy Angelino na zanak'ondry voalavo ary ho an'ny olom-boafidy dia i Goat koa ao amin'ilay menue. Ary ny olona manome voromailala miendrika na satro-boninahitra miendrika mofo toy ny fanomezam-pahasoavana.
tany Roma, fahita fahita ao amin'ny St. Petera Basilica ny Sabotsy Masina. Izany dia manomboka amin'ny 9 PM sy mandeha amin'ny hatramin'ny misasakalina araka ny mitondra eo amin'ny fanombohan'ny Paka maraina. Tamin'ny Alahadin'ny Paska, indrindra manomboka amin'ny bahoaka niandry ny Papa nanolotra tsodrano ny lavarangana fidirana.
Noho ny Papa sy ny Vatican, Roma dia toerana ho an'ny fankalazàna ny Paska tany Eoropa. Ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao handray anjara amin'ny fankalazana sy manatrika ny Vatican Palm Alahady faobe. Satria izany maimaim-poana, dia afaka mahazo tsara tarehy feno.
Raha toa ianao mikasa ny hanatrika Paka faobe tany Roma, fa tsara indrindra ny boky ny tapakila tany am-boalohany. Boky ny seza mialoha mba hanana ny tsara indrindra tahan'ny. Noho ny lazan'ny ny Paka ao amin'ny tanàna toy ny fety Roma, Paris, ary Amsterdam, Tsy azo atao mihitsy fahendrena ny drafitra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feaster-festivities-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / tr ny / de na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#Festivities Paka europetravel longtrainjourneys soso-kevitra trainjourney Tranride tendron'ny fampiofanana Train Travel travelfrance travelnetherlands